१० दिनदेखि अनसनरत डा. केसी प्रधानमन्त्री ओलीसँग फोनमा बोल्नै सकेनन - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१० दिनदेखि अनसनरत डा. केसी प्रधानमन्त्री ओलीसँग फोनमा बोल्नै सकेनन
२६ असार २०७५, मंगलवार ०९:२६ July 10, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २६ असार । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयूमा १० दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
‘अहिले पिसाबका लागि शौचालयसम्म जान सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अवस्था जटिल भए पनि अत्यावश्यक औषधिसमेत लिन मान्नुभएको छैन ।’ उनलाई अक्सिजन र स्लाइनबाहेक अरू औषधि नदिइएको उनको भनाइ छ ।,